Ugaas Muxuu yahay? Muxuu ahaan jiray? Maxaase haboon inuu noqdo? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Baahida keentay in la helo qof ugaas ah waa in reer kasta ay yeeshaan maamul iyaga u gaar ah oo ay arrimahooda uga tashtaan, kuna xallistaan waxyaabaha reerka ka dhexeeya oo ay ku xiran tahay horumarkooda. Waxaa kaloo uu yahay amaba uu qabtaa xiriirka qabiilada kale kala dhexeeya iyo weliba sidii qabiilka uu madaxda u yahay iyo qabiilada kale u wada noolaan lahaayeen oo haddii ay wax dhexmaraan, arrimahaas xal loogu heli lahaa loona yareyn lahaa is fahanwaaga dhex dhalan kara. Badanaana xilkaan waxaa loo dhibaa qof ka soo jeeda qoyskii horay xilkaan u hayay, loomana fiiriyo aqoon, waayo aragnimo iyo xil kasnimo dheeri ah.
Ugaas muxuu ahaan jiray?
Ugaas waxa uu ahaan jiray, madaxa ugu sareeya reer kasta uguna karaameyn badan. Ugaasku waxa uu lahaa awood uu go’aanno ku gaaro isaga oo kaashanaya nabadoonnada reerka oo badanaa ka yimaada qeybaha kala duwan ee reerku ka kooban yahay. Ugaasku waxa uu hormuud ka ahaa nabadeynta beelaha ay wada degaan iyo weliba nabadeynta reerka dhexdooda. Ugaasku waxa uu kalsooni buuxda ku lahaa in go’aamada uu gaaro ay yihiin kuwo uu u gaaro rerkiisa, waxaase ka reebanaan jiray inuu gaaro go’aamo uu dano gaar ah ku gaaraayo amaba uu hoos ugu dhigayo sharafta iyo karaamada reerka uu ka soo jeedo.
Muxuu Ugaas hadda Yahay?
Waxaa jira ugaasyo badan oo iyagu u dhaqma sidii ay ugaasyadii hore u dhaqmi jireen oo weliba iyagu garanaaya meesha ay ku egtahay awoodooda oo aan maalin dheeri ah aanan ku mashquulin wax aanan iyaga loo dirin. Shaqooyinka uu Ugaasku lahaana waxeyba ahaayeen kuwo cad oo aysan dood badan ka taagneyn.
Laga soo billaabo 2012ka markii ay ugaasyadu yeesheen awood siyaasadeed oo ay ku xulayaan xildhibaanno waxaa meesha ka baxay howlihii asal ahaan ay reerka u qaban jireen, waxeyna isu bedeleen kuwo leh magacii Ugaaska laakiin qabta shaqo aysan reerku isaga u dirsan. Taas waxaa ka daran, ugaasyadu waxa ay ahaayeen kuwa loogu aaminidda badan yahay marka ay timaado u xaq sooridda reerka uu ugaaska u yahay waana middaas midda loo doortay, weyse dumiyeen kalsoonidaas iyaga oo wax kasta ka hormariyay dantooda gaarka ah.
Ugaaska reerka oo la rabay inuu reerka uu ku dhex jiro oo weliba reerka u adeego yeeshana kalsooni uu dadkiisa kula dhex jiro ayaa dadkii uu ka dhashay iska ilaalinaya, sababtuna ay tahay oo kaliya isaga oo xaqsoorkii lagu yaqaannay hareer maray. Ugaasyada badankooda maanta waxa ay u eg yihiin kuwo ka mid ah xafiisyada dowladda, oo waxaad arkeysaa inay meel kasta oo xaflad dowladeed laga sheego iyaga oo jooga oo weliba ka hadlaya wax kasta oo loogu yeero sidii iyagoo ah siyaasiyiin iyagu ka shaqeeya howlaha lagu casumay. Ugaasyadu maanta wax ay dhumiyeen kalsoonidii ugaasnimo, waxa ayna u xuubsiibteen siyaasiyiin ka dhinac socda siyaasiyiinta ay iyagu meesha geeyeen meeshii shaah looga shubana waa aadayaan iyagoo laba shilin dhaafsanaya doorkii shariifka ahaa iyo shaqadii ay beel weynta uu ka dhashay uu u hayay.
Maxaa maanta la gudboon ugaasyada marin habaabiyay masuuliayaaddii reerku u diibay?
Ugaas, haddii aad isleedahay laguma oga, lagulamana xisaabtami karo ee waxaad rabto samee, waxaad moog tahay meesha ay maanta wax maraayaan. Waxaa hubanti ah in maanta isla xisaabtanku uu ka fudud yahay sidii hore, oo meel kasta oo aad tagto la heli karo, la ogyahay oo weliba wax qarsoon amaba qarsoonaan karaahi aysan jirin. Maanta ugaaskii raba inuu siyaasi noqdo waxaa haboon inuu siyaasadda isu diyaariyo uu reerkiisa siyaasadda kala dhex baxo inta aysan foolxumo ka raacin dadka hortiisa.
Xilka ugaasnimada waa ay ka qaalisan tahay midda siyaasiga. Xilkaasi waa xil aan laga tegin oo aan laga dhicin lagaana qaadi Karin haddii aad u shaqeyso sidii loogu talo galay. Xilka siyaasiguse waa xil isagu wareega oo maalinba meel jooga oo maanta uu hebel hayo berrina uu hebel kale heyn doono. Haddaba haddii uu hunguri kaaga jiro inaad xilkaas ugaasnimo ku bedeleto xilka siyaasinnimo waa doorasho aad xor u tihiin, waxaase haboon oo weliba darajo la gaaro ah inuu Ugasku Ugaasnimo ku ekaado oo weliba ilaaliyo masuuliyadda gaarka ah oo uu u hayo ummadda uu ka dhashay, waana taas midda kor u qaadi karta sumcadda reerka oo reerku waxa uu yeelanayaa hogaan lagu kalsoon yahay oo looga tashado xal u helidda duruufaha la soo gudboonaada reerka aad madaxda u tahay. Haddiise masuuliyaddaas muhiimka ah ee Ugaaska loo dhiibay inta meel la iska dhigo ugaasku ku mashquulo howlo kale, waxaa imaaneysa in la kala daato oo weliba reerku waayo wixii ugaaska loo diray inuu qabto.
Ugaasku waxa uu halbowle u yahay qaab dhismeedka qabiilada Soomaaliyeed, waana isku xiraha, horumariyaha iyo aayo ka taliyaha reerka uu ugaaska u yahay. Taariikhaha reer kasta waxaa la sheegaa ugaas taariikh dheer ku leh reerka dhexdiisa. Waxa uu ugaasyada kale ee reerka uga duwanaaday waa waxqabad iyo weliba isagoo soo jiitay dadka uu ugaaska u yahay. Maanta wuu yar yahay ugaas Soomaaliyeed oo sifahaas leh. Weynta la waayay ugaas sifahaas lehna waxa ay qeyb weyn ka tahay burburka dalka ku dhacay guud ahaan. Waxaan rajeyneynaa in ugaasyadu u noqdaan oo ay garowsadaan howsha ugaaska laga rabo inuu qabto si aysan reerkiisa uga dayacmin ugana dabamarin reeraha kale ee la degan dalka Soomaaliya.
Xigasho: Codka Shacabka Soomaaliyeed
« Maamulka waxbarshada oo la baahiyo ayaa horumar iyo midnimo u keeni karta waxbarashada dalka guud ahaan.
(Daawo Sawirada) Dood cilmiyeed ku saabsan U sinnaanta waxbarashada G/Banaadir oo lagu qabtay Magaalada Muqdisho. »